Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Bulgaria Iyo Italy Ee Isreebreebka Koobka Adduunka 2014 - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Bulgaria Iyo Italy Ee Isreebreebka Koobka Adduunka 2014
LINE-UPKA MACQULKA AH
Kulankan ayaa waxa uu qeyb ka yahay isreebreebka koobka adduunka. Waxaana xulka Italy dib ugu soo laabtay Daniele De Rossi oo dhaawac ugaga maqnaa. Balse waxaa ka maqnaanaya Mario Balotelli oo dhowaan qalliin lagu sameeyey.
Giampaolo Pazzini iyo Angelo Ogbonna ayaa iyaguna diyaar u ah kulankan inay ka qeybgalaan kadib markii ay ka soo kabteen dhaawacyo soo gaaray.
waxaana uu ku bilaabankaraa Prandelli Sebastian Giovinco oo ka dhinac ciyaaraha Pablo Osvaldo kaasoo ka mid ahayn xulkii Euro 2012.
Daafaca Torino Ogbonna iyo Barzagli iyo Bonucci ayaa dhici karta in daafaca Italy lagu aamino.
Halka garbaha dambe ay ka dheeli donaan
Cristian Maggio iyo Emanuele Giaccherini iyadoo xulka Italy ay ku dheeli doonaan qaabka 3-5-2.
Xulka Bulgaria Dimitar Berbatov ayaa ka soo noqday ka fariisashadiisa ciyaaraha caalamiga ah waxana uu kamid noqonayaa xulka dheelaya caawa iyadoo ay tahay in uu tababare Penev uu kala doorto Popov iyo Mitsanski kan uu dhinaca weerarka ku aaminayo.
Xulka Italy waxa uu kaga jiraa lambarka lixaad qiimeynta Fifa halka uu Bulgaria uu kaga jiro 89.
Weeraryahanka Roma Pablo Osvaldo oo labo kulan hore ugu saftay Italy waxa uu ku dhashay magaalada Buenos Aires
Xulka Italy 3-5-2 ayay ku dheeleen labadii kulan ee ugu horeysey ee Euro 2012 ee Spain iyo Croatia halka markii dambe ay u bedesheen 4-3-1-2 intii ka hartay tartankaas.
Xulka Italy waa ku badiyeen dhamaan kulamadii isreebreebka ee Euro 2012.
Bulgaria uma aysan soo gudbin tartano heer caalami ah tan iyo sanadkii 2004tii ee ahaa tartankii qaramada Yurub Portuqal halkaas oo ay ku hareen wareegii hore waxaana 2-1 ugaga badiyey xulka Italy.
Labada xul ayaa waxaa ay ku wada kulmeen isreebreebkii koobkii adduunka ee 2010 halkaa oo oo ay kulankii Bulgaria ka dhacay eber eber ku kala baxeen halka kulankii Rome lagu qabtayna 2-0 ay ku badisey Italy.